Tokko Hin Tollee Budaan Lakkuu Dhaltee – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTokko Hin Tollee Budaan Lakkuu Dhaltee
Baatii jaha dura waan har’a Oromiyaa keessatti tahaa jiru kan ilaalu Uummata Oromoo hubachiisuuf maxxansaa “Tokko Hin Tollee Budaan Lakkuu Dhaltee”jedhu barreessen ture. Gaafa 7/21/2018 Ayyaantuu irrattis bahee turee. Haalli uummatni keenya keessa jiru maxxansaa kana deebisee akkan baasu na dirqee jira. Kunoo itti dhiyaadha!
Damee Boruu tiin, Bitootessa 22, 2018
Utuu isaan Oromiyaa nutu bulchaaa jira jedhanii qabeenyi Oromoo yaroo saamamee dhumu maaliif biyyi keenya saamamuu qaba jedhanii gaafachuu irra afaan kaa’aa fudhatanii afaan qabachuu filatan. Saamicha deemaa jiru dhaabbuuf aangoo fi humna akka hin qabne beekamaa dha. Karaa biraa mirgi Uummata Oromoo yaroo dhiitamu dhiisaa jechuuf onnee hin arganne. Yoo dubbatan waan hojii irraa ar’amanii fi mana hidhaa seenaniif akka nama hin agarree gama ilaalanii darbu. Ilmaan Oromoo tumuu, hidhuu fi ajjeessuu isaanitu diina dura deemee raawwachaa ture. Har’a illee akkuma durii sana itti jiru. TPLF diina Uumata Oromoo keessa isa duraa waan taateef beekaa OPDO fi Uummatni Oromoo dhugdaa fi garaa akka tahan gochaa turte. Sababa kanaaf Uummatni Oromoo OPDO ijaarsa kooti jedhee yaroo mararsiifatuu fi ammatu argaa hin jiru. Ijaarsi OPDO illee dhaabba ayyaan ilaallatoota fi namootni halagaa Afaan Oromoo beekaniin guutamtee Uummata Oromoo tajaajiluu irraa akka of tajaajilaan carraa guddaa laateef jira.
“Tokko hin tollee budaan lakkuu dhaltee”, jedhan. TPLFf meeshaa taatee OPDOn dhumaatii Uummata Oromoof itti gaafatama qabdu utuu hin raawwatiin har’a immoo dabartee qabsoo bilisummaa Uummata Oromoo danquuf oftuultota Amharaa uummata keenya irratti ijaaruun hojii amajaajii akka hojjetaa jirtu dhokataa miti. Ajajan Waraana Muumicha Ministeerati haa jedhamu malee har’a waraana Uummata Oromoo irratti adda duraan kan oofaa jiru Jeneraaloota TPLF jedhee uummatni iyyaa jira. Yoo dhugaa ajajaan waraana Itoophiyaa Muumicha Ministeeraa tahe kan Uummata Oromoo fixaa jiru OPDO akka tahe Uummatni Oromoo adda baafatee beekuu qaba. Yoo waraana kan oofaa jiru akka uummatni himatu Jeneraaloota TPLF tahe OPDOn hantuuta hanfaaroo Leencaa mataa irra keewwatee sirbaa jirtu malee aangoo dhugaa akka hin qabne ragaa dha.
Aarsaa guddaa nu barbaada malee bilisummaan dhufaa jira. Uummatni keenya qabsoo hadhaa’aa yaroo dheeraaf of qopheessuun dirqama. Diinni keenya lameen TPLF fi oftultonni Amhaara nutti wal furanii nu dadhabsiisuuf deemu. Yoo hammatee immoo wal tahanii uummata keenya cabsuu irratti boba’uun ni mala. Qabeenya Oromiyaa malee lamaanuu jiraachuu waan hin dandeenyeef.
Waan tahuuf deemaa jiru haala biyya komunsitoota keessatti bara kudha sagalii fi sadetamman keessa tahaa ture fakkaata. Mikaa’el Gorbaachoov dimookraasii fiduu walitti dhufeenya sooveeti (USSR) dhiigee nagaan lola malee biyyoota bilisa tahan kudha shan akka uumamni godhee jira. Yugoslaaviyaan biyya uummatni adda adda jaha tahanii naannoon of bulchaa mootummaa gidduu galeessa tokko qabaachaa turan turte. Akka Amhaara biyya Impaayeera Itoophiyaa kana Uummatni Sarbiyaa jedhamu baayyee olaantuumman kan itti dhagamu ture. Biyya Yugolaaviyaa kanaaf itti gaafatama guddaa kan qaban waan isaanitti fakkaatuuf eenyu iyyuu akka bilisa bahu hin fedhan. Sababa kanaan waraana naannoo sanatti fidaniin namni baayyeen dhumuu danda’ee jira. Dhuma irratti biyyi lafaa isaanitti dirmata humna Sarbiyaa cabsuun akka biyyoon jahanuu biyya bilisummaa qabu tahanii godhamee jira. Isaan keessa Sarbiyaan illee biyya tokko taatee jirti.
Ani illee akka namoota tokko tokko mul’ata qaba jedhee hin waakkadhu. Garuu muxxannoo, hubannaa fi xinxala loojikii (Logical Analysis) qabuun kan natti argaama jiru haalli fakkeenyi yugoslaaviyaa keessatti tahee akka uummata keenyatti dhufaa jiru dha. Gaafa Impaaerri Itoophiyaa caccabu Oromiyaan saatii digdamii afur keessatti bilisa bahuu dandeessi. Rakkinni keenya guddaan gaafa Impaayerri Itoophiyaa caccabu Oromiyaan waan sabaa fi sab lamii hedduun marsamtee jirtuuf tasgabii fi nageenya naannoo keenyatti qabaachuuf amma kaafnee irratti hojjechuu qabna.Waraana caala kan nu barbaachisu hojii ijaarsaa fi siyaasa akka tahe adda baafne hubachuun barbaachisaa dha. Hojiin Qeerroo keenya amma dachaa dachaan babalchuu qaba. Uummatoota naanoo keenya jiran hundaaf humna Qeerroo ijaaruu fi wal quunnamtii jabaa qabaachuun haalan barbaachisaa dha. Warri aangoo irra jiran ayyaan ilaallatoota waan tahaniif gara humni jabaate deemu malee dhimmaa uummata isaanii fixaan baasuuf of hin kenanan. Kan fedhii uummataa bakkaan gahuu of kennu qeerroo fi qarree uummata keessaa maddan akka tahe adda baafnee hubachuu qabana qabna. ILkee TPLF isa dhumaa of irraa buqqisuuf qabsoo keenya daran fininsaa, humna Amhaara nu liqimsuuf afaan banaa jiru of irraa facisaa, qabsoon keenya gara uummatoota ollaa Oromiyaati babal’ate akka fira horachaa deemnu gochuun dirqama tokko tokko keenyaa ti.